Windows 7: "तपाईंको प्रतिलिपि साँचो हो।" यो शिलालेख, कसरी मिलाउने किन थियो?
"माइक्रोसफ्ट" कर्मचारीहरु जमीन आफ्नो सञ्चालन प्रणाली लागि अद्यावधिक जारी, विन्डोज7तर सहित विभिन्न उपयोगी सफ्टवेयर तपाईंको OS डाउनलोड गर्न सक्छन् भनेर बीचमा बस्न छैन र नियमित, त्यहाँ सानो आश्चर्य हो। उदाहरणका लागि, pirated संस्करण को धेरै प्रयोगकर्ताहरू, तपाईं एउटा सन्देश विन्डोज7देखि प्राप्त हुन सक्छ: "छैन साँचो छ तपाईंको प्रतिलिपि।" के छ?
पहिलो, सबै भन्दा अप्रिय, तर एकदम अहानिकारक यो सन्देश को उपस्थिति कारण के तपाईं कम्प्युटर किनेको जहाँ भण्डारमा धोखा भन्ने तथ्यलाई मा झूठ हुन सक्छ। तपाईं एक लाइसेन्स संस्करण लागि पैसा भुक्तानी, तर अद्यावधिक त ठानेको छैन। यो आधारित तपाईं पसलमा र मांग क्षतिपूर्ति सम्म रोल गर्न सक्नुहुन्छ।
विधि, पाठ्यक्रम, अविश्वसनीय। के तपाईं आफ्नो मा सञ्चालन प्रणाली पुन र सेवा इन्कार भन्न सक्छ। एक चरम अवस्थामा, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर र दोकान मा स्थापित भएको OS संस्करण तुलना गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले मेल भने, यो सबै को लागि प्रतिबिम्बित गर्न अवसर छ। तथापि, वार्ता बाहिर काम छैन भने हुनेछ, तपाई सुरक्षित तरिकाले एक स्वतन्त्र पीसी स्थापना गर्न अगाडि बढ्न सक्छ।
त्यसैले, यदि एउटा सन्देश Windows7मा देखिन्छ के, "तपाईंको प्रतिलिपि साँचो हो?" यसलाई पूर्ण सिस्टम reinstallation छ - कम्प्युटर संग ठूलो समस्या हुँदा प्रयोग गर्न सबैभन्दा मूल बाटो। यो विधि तीन अवस्थामा तपाईं उपयुक्त छ:
तपाईं एक स्थिति भने माथि वर्णन गरिएको छ। तपाईं मूल स्थापना सीडी छैन भने वा तपाईं अपरेटिङ सिस्टम गठन निर्धारण गर्न सक्दैन गैर-सक्रिय अपरेटिङ सिस्टम को समस्या सामना गर्न धेरै गाह्रो छ। नयाँ ओएस गठन डाउनलोड गर्न भन्दा उपयुक्त प्रमोटर गाह्रो हुनेछ पाउन।
दोस्रो मामला थप सामान्य छ। तपाईं भर्खरै स्थापित प्रणाली, तर Windows7मा देखिन्छ: "छैन साँचो छ तपाईंको प्रतिलिपि?" फेला पार्न र नयाँ ओएस नै डाउनलोड गर्नुहोस्। उच्च गुणस्तरीय विधानसभा बनाउन जो गर्न राम्रो प्रोग्रामर, प्रणाली स्वचालित रूपमा अद्यावधिक कि उनको हानि गर्न सक्छ कहिल्यै छ डाउनलोड।
तपाईँले हराएको छ भने (मेटिएको) तपाईंको OS प्रवर्तक र जहाँ यो लगियो, भूल। दुर्भाग्यवश, को चयन लागि कार्यक्रम को सबै प्रमुख इजाजतपत्र सार्वभौमिक।
अन्तमा, हामी अपरेटिङ सिस्टम पुन छ नगर्ने ती मिल्यो। कसरी विन्डोज7सन्देश छुटकारा गर्न "तपाईंको प्रतिलिपि साँचो छ" डाटा को हानि बिना?
पहिलो विधि कुनै पनि विशेष ज्ञान छ तपाईंलाई आवश्यकता छैन। मुद्दा responsibly एक निश्चित उन्नयन KV971033 उदीयमान लागि। त्रुटि "Windows को तपाईंको प्रतिलिपि साँचो छैन" बेपत्ता, तपाईँले यसलाई स्थापित कार्यक्रम हटाउन आवश्यक छ।
यो गर्न, "मेरो कम्प्युटर" जाने र शीर्ष मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् "स्थापना रद्द वा कार्यक्रम परिवर्तन"। कि पछि, "हेर्नुहोस् स्थापित अद्यावधिक" बाँया मेनु चयन गर्नुहोस्। अब तपाईं हामी सूची अद्यावधिक, दायाँ फेला पार्न आवश्यक छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा मुख्य गल्ती - तिनीहरूले खोज माध्यमबाट यसलाई बनाउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर, त्यो समय मार्फत काम गर्दछ र एक 100% परिणाम ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले तपाईं सबै आफ्नै आँखाले हेर्न छन्। जब तपाईं यो पत्ता लगाउन, सही क्लिक गर्नुहोस् र मेट्नुहोस्। कि पुन: सुरु गरेपछि कालो पर्दा "आफ्नो प्रतिलिपि साँचो छ" देखा पर्न बन्द गर्नुपर्छ।
यो काम गरेन
को हेरफेर सन्देश देखा जारी पछि "तपाईंको प्रतिलिपि साँचो छ" यदि के गर्न? यस मामला मा, तपाईं स्वयं अद्यावधिक हटाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, निम्नानुसार अगाडि बढ्नुहोस्।
पहिलो, हामी रिबुट लागि बाहेक, अघिल्लो अनुच्छेद मा वर्णन गरिएको सबै दोहोर्याउनुहोस्।
"मेरो कम्प्युटर" जाने र Alt थिच्नुहोस्।
पहिले लुकेको मेनु देखा पर्नेछ। "फोल्डर विकल्प।" - "उपकरणहरू" क्लिक गर्नुहोस्
"दृश्य" ट्याबमा, चेक मार्क लाइन बाट "प्राधिकरण लुकाउनुहोस् दर्ता लागि ..." साथै मा स्विच बटन रूपमा हटाउन, "देखाउनुहोस् लुकेका फाइलहरू र फोल्डरहरू।"
यो सुरक्षित तयारी चरण समाप्त हुन्छ। अब तपाईं सावधान छ।
"मेरो कम्प्युटर" मा दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस् र चयन "व्यवस्थापन गर्नुहोस्।"
बायाँ मेनुमा "सेवा र आवेदन", subparagraph "सेवा" चयन गर्नुहोस्।
दायाँ सूचीमा, हामी सेवा, "सफ्टवेयर संरक्षण" (sppsvc) आवश्यक छ। यसमा बायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्।
बायाँ तपाईं एउटा विवरण र दुई बटन हेर्नुपर्छ। "सेवा बन्द" क्लिक गर्नुहोस्।
झ्याल बन्द छैन, र सिर्फ डेस्कटप जानुहोस्।
अब हामी सेवाको कामको लागि जिम्मेवार छन् भन्ने दुई फाइलहरू मेटाउन आवश्यक, सन्देश "तपाईंको प्रतिलिपि साँचो हो।" कसरी मिलाउने (हटाउन) तिनीहरूलाई? सुरुमा, तिनीहरूले अद्यावधिक विस्थापन गर्दा कार्यक्रम को व्यवस्थापन मार्फत हटाइनेछ थियो, तर यो सबै आफैलाई जाँच गर्न राम्रो छ।
Windows / System32 जाने र विस्तार .C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 संग दुई फाइलहरू खोजी। तिनीहरूलाई मेटाउन। तुरुन्तै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने स्वचालित खोज सम्भवत काम छैन, त्यसैले तपाईं आफैलाई द्वारा फोल्डर सामग्रीहरू हेर्न आवश्यक छ।
कम्प्युटर तपाईं फाइलहरू प्रयोग गरिन्छ कि एक सन्देश दिन भने, तपाईंले चाहेको सेवा असक्षम र पछाडि खोल्दै बिना रिबुट गर्ने प्रयास गरेका छन् भनेर पक्का "सुरक्षा।"
फाइलहरू हटाउन पछि पनि कम्प्युटर र वालपेपर changer पुनः सुरु गर्न आवश्यक पर्दछ डेस्कटप। यो गरेर, तपाईं सुरक्षित फिर्ता "जीवन" गर्न, यो पहिले नै वर्णन गरिएको छ रूपमा समावेश गर्न जान सक्नुहुन्छ, र फेरि "सफ्टवेयर को सुरक्षा।"
तपाईं फाइलहरू मेट्न पछि अरू के के गर्नुपर्छ? पहिलो, सञ्चालन प्रणाली को स्वत: अद्यावधिक बन्द। तपाईं Windows को एक pirated संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो निर्माता प्रदर्शन को हेरविचार र नयाँ अपडेट, तपाईं मूलतः बेकारी भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। यो गर्न, कन्ट्रोल प्यानल जाने - "प्रणाली र सुरक्षा" - "अद्यावधिक"। "बन्द गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् स्वचालित अद्यावधिक"। राम्रो खातामा, यो तुरुन्तै pirated अपरेटिङ सिस्टम को स्थापना पछि गर्नुपर्छ, र पनि आधिकारिक छ। शायद सबैलाई नयाँ विन्डोज 10 बिना प्रयोगकर्ता कार्यक्रम सोधेर हटाइएका छन् कारण छ कि समस्याको बारेमा सुनेका छ। कसरी उपयोगी ती वा अन्य अद्यावधिक हो, अज्ञात: पनि ओएस को पुरानो संस्करण संग।
सबै प्रक्रियाहरु बाहिर गरेपछि सञ्चालन प्रणाली को आफ्नो प्रतिलिपि सक्रिय छ। इन्टरनेटमा तपाईं क्षणमा अवस्थित कि सम्मेलन को 80% को लागि उपयुक्त हो जो विश्वव्यापी activators, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, हटान WAT देखि कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस्। वास्तवमा, यो प्रवर्तक प्रयोग कस्तो कुरा छैन - स्वचालित वा साधारण, पुनः विन्डोज7को सन्देश छुटकारा रही एक आवश्यक भाग हो: "छैन साँचो छ तपाईंको प्रतिलिपि।" कसरी हटाउने, हामी बुझ्न। हामी तपाईंलाई हाम्रो सिफारिसहरू मदत गर्नेछ आशा।
दुर्भाग्यवश, कागज मा प्रस्तुत विधि समस्या सामना गर्न मात्र तरिका हो। तपाईं यसलाई मदत गर्दैन भने पूर्ण सिस्टम reinstallation बन्ने अन्तिम मौका। मुख्य कुरा - स्वत: अद्यावधिक असक्षम भूल छैन, र सधैं स्वतन्त्र आवश्यक छ यदि सिस्टम डाउनलोड गर्न जाँदै छ सबै "अद्यावधिक" प्रमाणित गर्नुहोस्।
विन्डोज घटना लग7प्रणाली लग म कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ
कसरी प्रशासक पासवर्ड रिसेट गर्न?
प्रक्रिया नाइटो नवजात crumbs?
Plasterboard को पर्खालहरु कसरी sheathe गर्न: राज आफ्नै हात मर्मत